हनिमुनको तस्विर गलत समयमा पोस्ट गर्दा आलोचना र ट्रोलको शिकार भईन् रजनीकान्तकी छोरी सौन्दर्या ! «
हनिमुनको तस्विर गलत समयमा पोस्ट गर्दा आलोचना र ट्रोलको शिकार भईन् रजनीकान्तकी छोरी सौन्दर्या !
एजेन्सी, ५ फागुन । बलिउडका चर्चित अभिनेता रजनीकान्तकी छोरी सौन्दर्या रजनीकान्तले ११ फेब्रुअरीमा विशगन वंगामुडीसँग दोस्रो विवाह गरिन् । अहिले उनी हनिमुन मनाईरहेकी छिन् । यहिँ क्रममा उनले श्रीमानसँगको हनिमुनको तस्बिर सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरेलगत्तै उनलाई आलोचनाका साथै ट्रोल बनाइएको छ ।
हिउँले छपक्कै ढाकिएको ब्याकग्राउन्डसहितको तस्बिर निकै राम्रो छ तर, यी तस्बिर काश्मिरस्थित पुलवामा हमलापछि पोष्ट गर्नु र मृतक जवानका लागि शोक प्रकट नगर्नु सौन्दर्याका लागि भारी भएको हो ।
सौन्दर्यालाई यहिँ तस्बिरका कारण सोसल मिडियामा ट्रोल बनाइएको हो । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘कम्तीमा दुई दिनका लागि रोकिऊ । तपाईंहरु दुई जना रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ तर पोष्ट नगर्नुहोस् म्याडम । धन्यवाद… कारण सायद तपाईंलाई थाहा होला ।’
एक अन्य प्रयोगकर्ताले सौन्दर्याको पोष्टमा कमेन्ट गरे, ‘तपाईं रमाइलो गर्नुहोस् तर काश्मिरमा मारिएका जवानप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गर्नुहोस् ।’
केही प्रयोगकर्ताले सौन्दर्याले दोस्रो विवाह गरेर हनिमुन गएकोमा ट्रोल गरेका छन् । जवानको मृत्युमा सौन्दर्याले केही पनि पोष्ट नगरेकोमा एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘पूरा देश रगतको आँशु रोइरहेको छ र तपाईं यस्तो तस्बिर पोष्ट गरिरहनु भएको छ ।’
ट्रोलपछि एक दिन सौन्दर्याले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलबाट एउटा तस्बिर पोष्ट गर्दै शहीद भएका जवानलाई श्रद्धाञ्जली दिएकी छिन् ।